Imirikiti ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ na-eto eto, na-eto, na-echekwa atụmatụ. Nweta ndị ahịa, bulie ndị ahịa ma debe ndị ahịa. Mgbe m gara ogbako Webtrends, amutakwara m na iweghachite ndị ahịa mbụ bụ nnukwu atụmatụ. Kemgbe m gara ogbako ahụ, anọ m na-ele anya maka imeghachi azụ ma ọ bụ mkpọsa mgbake. N’oge na-adịbeghị anya, m gburu akaụntụ ikuku Boingo m. Ọrụ ahụ rụrụ ọrụ zuru oke ma nwee ngwa iPhone pụtara ìhè nke jikọtara ọdụ ụgbọ elu ọ bụla na-esonye na ihuenyo. M